Bulchootii Addunyaa Kora Waltajjii Dinagdee Addunyaatiif Siwizerlandi, Davos jiranii pirez. Tiraampillee kalee achi dabre
Amajjii 25, 2018
Pirezidaantiin Amerikaa Donaldi Tiraampi kora dhaabii WEF, World Economic Forum biyya Siwizerladitti qopheesseef magaalaa Davos jira.
Waltajjii Dinagdee Addunyaa, WEF gannuma gannaan taahanii waan adudnyaan gama jirennaatin,siyaasaatii fi barnootaatiin keessa jirtu laalanii akka wayyeessaniin irratti mari’atan.
Dureeyyii addunyaa 2,500, gaazexeessitota, bulchootaa addunyaatii fi nama hedduutti itti dhufa. Bulchootii kora kana dhufan karoora addunyaan wayyeessuu dandahan irratti wa jedhan.Pirezidaantiin Amerikaa, Tiraampi karoora isaa Amerikaa Asi Aanfanna ykn America First jedhu keesasstti daldala addunyaa qaqqajeelchanii mi’a biyya alaatii Amerikaa dhufu haga tokkotti qaraxa dabaluuf qabuun achi dabre.
Amerikaan ganna 18 keessatti baranuma pirezidaantii isii kora kanatti ergatte.Pirezidaanti Biil Kilinton bara 2000 keessa achi dhaqe.
"Nu mariitti dhugeeffanna.Pirezidaantiin Amerikaa asi jiraachuunuu akka addunyaanuu walqixxee wal mari’ttu tolcha,” jedha pirezidaantiin Waltajjii Dinagdee Addunyaa, Borge Birendee.
Pirezidaantiin Amerikaa Donald Tiraampi maashina wayaan miican fi mi’a oowwaa aduutiin guurratan,Solar Panel ka biyya alaatiin Amerikaa dhufaa irrati qaraxa dabaluuf guyyaa dheengaddaa mallatteesse. Amerikaa mi’a kana irraa guddoo faaydaa hin argattuu jedhe.
"USA daldala namuu faaydaa keessaa aragatutti akka dhugeeffattu addunyaa agarsiisuutti jirti malee faaydaa ufii hin gattu tanaaf hajajii bahe,” jedha. Muummeen mininstera Indii, Narendiraa Moodi ammoo dubbii pirezidaantiin Amerikaa jedhe suniin wal mormotu jedhe.
“Warra akka biyyitii wal irraa bittee hin gurguranne tolchuuf qaraxa dabalutti dhufuutti jira.Jarii kun akka addunyaan akka feete waliin hin daldalle dhowwuu qofaa mitii akka seera addunyaatuu qonyisuu fedhaa,” jedha.
Pirezidaantiin Amerikaa qaraa faaydaa Amerikaa asi aanfannaa jedha.Biyyitii hedduun tana irratti yaada akka akkaa qabdi.
Haleellaan Boombii Liibyaa Keessaa Lubbuu 30 Ol Galaafate